ဒီနေ့ဒီအချိန်ထိ ဘယ်နိုင်ငံမှာမှနိုင်ငံရေးခိုလှုံခွင့်တောင်းခံမထားဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းပြောပြလာတဲ့ အလှမယ်သူဇာဝင့်လွင် – Maythadin
ဒီနေ့ဒီအချိန်ထိ ဘယ်နိုင်ငံမှာမှနိုင်ငံရေးခိုလှုံခွင့်တောင်းခံမထားဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းပြောပြလာတဲ့ အလှမယ်သူဇာဝင့်လွင်
May Thadin | October 5, 2021 | Cele News | No Comments
မနေ့က လန်ဒန်ရောက် မြန်မာမိသားစုများ ကျင်းပတဲ့ မြန်မာ့နွေဦးတော်လှန်ရေး အတွက် Fundraising ပွဲလေးကို အားဖြည့်ကူညီပေး ဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာပြည်က အစားအစာတွေရော
ကိုယ့်မြန်မာလူမျိုးတွေနဲ့ရော တွေ့ဆုံခွင့်ရတော့ မြန်မာပြည်ကို အရမ်းလွမ်းမိတယ်သူဇာက လက်ရှိ လန်ဒန်မှာ Agency နဲ့တစ်နှစ်စာချုပ် ချုပ်ဆိုပြီး အလုပ်တွေလုပ်ကိုင် နေပေမယ့် စာချုပ်ပြည့် ပြီးသွားရင်တော့ ကိုယ့်မြန်မာပြည်ကိုလည်း ပြန်ခွင့်ရ ချင်ပါတယ်။
ခုထိ ဘယ်နိုင်ငံမှာမှ နိုင်ငံသားခိုလှုံခွင့်တောင်းဆိုထား တာမရှိပါဘူး အဓိ က က မြန်မာပြည်ကြီး အေးအေးချမ်းချမ်း ဖြစ်သွားပြီးအရင်လို မိသားစုနဲ့ တူတူပြန်နေချင်တာပါ သူဇာ့လိုပဲ မိသားစုနဲ့ဝေးကွာနေကြသူတွေလည်း ဆုံစည်းချင်နေကြမယ်လို့ ထင်ပါတယ်
ကိုယ်ဝါသနာပါရာ အနုပညာ လုပ်ငန်းတွေကို ပျော်ရွှင်စွာနဲ့ လုပ်နေရမယ့်အချိန်မှာ ရှောင်ပုန်းနေကြရတဲ့ သူဇာအ မ အပါအဝင် အခြားအနုပညာရှင်တွေထိန်းသိမ်းခံထားရတဲ့ အနုပညာရှင်တွေကိုလည်း အမြန်ဆုံး လွတ်မြောက်စေချင်ပါတယ်။
ဒီလိုအချိန်မှာ လူငယ်တွေအပါအဝင် အားလုံးက ကိုယ့်ဘဝကိုယ့်အလုပ်ကို အောင်မြင်အောင်အသီးသီးကြိုးစား နေရမယ့်အစား ဒီလိုကာလဆိုးကြီးကို ဖြတ်သန်းနေရတယ်။
လွတ်လပ်ခြင်းကို မြတ်နိုးတဲ့သူတိုင်း လွတ်လပ်ခြင်းအစစ်အမှန်နဲ့ ပျော်ရွှင်ရတဲ့ဘဝကို အမြန်ဆုံးပိုင်ဆိုင်ရပါစေလို့ သူဇာဆုတောင်းပါတယ်။ဘယ်နိုင်ငံမှာမှ နိုင်ငံသားခိုလှုံခွင့်တောင်း ဆိုထားတာ မရှိကြောင်း အလှမယ် သူဇာဝင့်လွင်က လူမူကွန်ယက်မှာ ရေးသားထားပါတယ်။
မေန႕က လန္ဒန္ေရာက္ ျမန္မာမိသားစုမ်ား က်င္းပတဲ့ ျမန္မာ့ေႏြဦးေတာ္လွန္ေရး အတြက္ Fundraising ပြဲေလးကို အားျဖည့္ကူညီေပး ျဖစ္ပါတယ္။ျမန္မာျပည္က အစားအစာေတြေရာ
ကိုယ့္ျမန္မာလူမ်ိဳးေတြနဲ႕ေရာ ေတြ႕ဆုံခြင့္ရေတာ့ ျမန္မာျပည္ကို အရမ္းလြမ္းမိတယ္သူဇာက လက္ရွိ လန္ဒန္မွာ Agency နဲ႕တစ္ႏွစ္စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုၿပီး အလုပ္ေတြလုပ္ကိုင္ ေနေပမယ့္ စာခ်ဳပ္ျပည့္ ၿပီးသြားရင္ေတာ့ ကိုယ့္ျမန္မာျပည္ကိုလည္း ျပန္ခြင့္ရ ခ်င္ပါတယ္။
ခုထိ ဘယ္နိုင္ငံမွာမွ နိုင္ငံသားခိုလႈံခြင့္ေတာင္းဆိုထား တာမရွိပါဘူး အဓိ က က ျမန္မာျပည္ႀကီး ေအးေအးခ်မ္းခ်မ္း ျဖစ္သြားၿပီးအရင္လို မိသားစုနဲ႕ တူတူျပန္ေနခ်င္တာပါ သူဇာ့လိုပဲ မိသားစုနဲ႕ေဝးကြာေနၾကသူေတြလည္း ဆုံစည္းခ်င္ေနၾကမယ္လို႔ ထင္ပါတယ္
ကိုယ္ဝါသနာပါရာ အႏုပညာ လုပ္ငန္းေတြကို ေပ်ာ္႐ႊင္စြာနဲ႕ လုပ္ေနရမယ့္အခ်ိန္မွာ ေရွာင္ပုန္းေနၾကရတဲ့ သူဇာအ မ အပါအဝင္ အျခားအႏုပညာရွင္ေတြထိန္းသိမ္းခံထားရတဲ့ အႏုပညာရွင္ေတြကိုလည္း အျမန္ဆုံး လြတ္ေျမာက္ေစခ်င္ပါတယ္။
ဒီလိုအခ်ိန္မွာ လူငယ္ေတြအပါအဝင္ အားလုံးက ကိုယ့္ဘဝကိုယ့္အလုပ္ကို ေအာင္ျမင္ေအာင္အသီးသီးႀကိဳးစား ေနရမယ့္အစား ဒီလိုကာလဆိုးႀကီးကို ျဖတ္သန္းေနရတယ္။
လြတ္လပ္ျခင္းကို ျမတ္နိုးတဲ့သူတိုင္း လြတ္လပ္ျခင္းအစစ္အမွန္နဲ႕ ေပ်ာ္႐ႊင္ရတဲ့ဘဝကို အျမန္ဆုံးပိုင္ဆိုင္ရပါေစလို႔ သူဇာဆုေတာင္းပါတယ္။ဘယ္နိုင္ငံမွာမွ နိုင္ငံသားခိုလႈံခြင့္ေတာင္း ဆိုထားတာ မရွိေၾကာင္း အလွမယ္ သူဇာဝင့္လြင္က လူမူကြန္ယက္မွာ ေရးသားထားပါတယ္။
ဖေဖေပြေတီဦးနဲ့မေမေအူဝဲတို့ထောင်ထဲရောက်နေချိန် ( ၆ )နှစ်ပြည့်မွေးနေ့အတွက်အလိုချင်ဆုံးဆုကိုထုတ်ပြောလာတဲ့သားလေးဖိုးဓီ
နွေဦးတော်လှန်ရေး ရန်ပုံငွေ ဆောင်းဦးလှိုင် တကိုယ်တော်ဖျော်ဖြေပွဲကနေ ကန်ဒေါ်လာ ၃၄၀,၀၀၀ ကျော် ရရှိထား….
NUGအစိုးရကို ထောက်ပံ့ခြင်း စတာတွေကို လုပ်ဆောင်နေတယ်ဆိုပြီး ပြန်လည်ဖမ်းဆီးလိုက်ရတဲ့ သရုပ်ဆောင် ဦးဇင်ဝိုင်း….
ဘေးကင်းလုံခြုံတဲ့နေရာမှာရှိနေကြောင်း ပရိတ်သတ် ကို အသိပေးပြောပြလာတဲ့ ပြည်သူ့မင်းသမီးချော ခင် ဝင့် ဝါ